ကိုယ့်အတွက် ကာရိုက်တာက အရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ အနုပညာကြေးက အရေးမကြီးဘူး - လိုင်လာခန်း - Yangon Media Group
ကိုယ့်အတွက် ကာရိုက်တာက အရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ အနုပညာကြေးက အရေးမကြီးဘူး – လိုင်လာခန်း
ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် လိုင်လာခန်းကို အခုလိုမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး- ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်)နဲ့ ရိုက်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေရော ရိုက်ဖြစ်နေပြီလား။
ဖြေ- အခုတော့ မရိုက်ဖြစ်သေးဘူး။ စီစဉ်နေတုန်းပဲရှိပါသေးတယ်။ နောက်တစ်လ၊ နှစ်လလောက်နေရင်တော့ ရိုက်ဖြစ် မယ်။ နောက် ဦးမျိုးကလည်း အခုအလုပ်များနေတယ်။ ဇာတ်ကားကတော့ နှစ်ကားရိုက်မယ်။ သရဲကားတစ်ကား၊ အချစ်ဇာတ်ကားတစ်ကားရိုက်ဖို့ပါ။
မေး- သရဲဇာတ်ကားကို လက်ခံရိုက်ကူးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ကျွန်မအရင်ကလည်း သရဲကားရိုက်ဖူးပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာလည်း သရဲကားနဲ့ပဲပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားကလည်း ဟာသသရဲဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း တော်တော်အား ပေးခဲ့ကြတယ်။ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဆိုတာကတော့ ဘယ်လိုကာရိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်သရုပ်ဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိသတ်ကိုချပြချင်တာလည်း ဖြစ် ပါတယ်။ အခြားကာရိုက်တာတွေကို ရိုက်နေခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်လည်းပိုတိုးတက် လာပါတယ်။ အခုရိုက်မယ့် သရဲဇာတ်မှာလည်း ဟာသလေးနည်းနည်းပါမယ်လိုတော့ သိရပါတယ်။
မေး- အခြားထုတ်လုပ်ရေးတွေက လာကမ်းလှမ်းတာမျိုးရောရှိလား။
ဖြေ- အဲဒီလိုမျိုးကမ်းလှမ်းတာ တော့မရှိသေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မထင်တာက ငွေရေးကြေးရေးပိုင်းကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီမှာက မင်းသမီးတွေကို သိပ်အများကြီးမပေးနိုင်ကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်မတို့က ကာရိုက်တာအရမ်းရွေးပါတယ်။ ကာရိုက်တာနဲ့ ဇာတ်ကို အထူးပြုပြီးရိုက်တယ်။ နောက် ကိုယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ ကာရိုက် တာကများနေတော့ ဇာတ်လမ်းလည်း ရှားသလိုဖြစ်နေတာလည်း ပါတာကြောင့် လာကမ်းလှမ်းမှုတွေနည်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နောက်ကာရိုက်တာရှားရခြင်းအကြောင်းကလည်း ကိုယ်က တော သူမလေး ကျေးလက်ဓလေ့စရိုက်ဇာတ်ကားတွေကိုလည်း ကိုယ့် မျက်နှာက ရိုက်လို့မရဘူးလို့လည်း ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်က တော့ မြန်မာပြည်မှာမွေး၊ မြန်မာပြည်မှာကြီးပြီး မြန်မာလူ မျိုးဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့် လည်း ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး- အနုပညာနဲ့ ငွေရေးကြေးရေးက ကိုယ့်အတွက် ဘယ်အပိုင်းက ပိုအရေးပါလဲ။
ဖြေ- တကယ်တော့ ကိုယ့်အတွက်က ဇာတ်ကားတစ်ကားရိုက်မယ်ဆို ဇာတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာရိုက်တာက အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အနုပညာ ကြေးက အရေးမကြီးပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်လည်း အိန္ဒိယမှာ ဆက်မရိုက်ဖြစ် တော့ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကထဲကို ဝင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုမှာပေးတဲ့အနုပညာကြေးနဲ့ ဒီကအနုပညာကြေးက တော်တော်ကွာတယ်ဆိုတာလည်း လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ အနုပညာဆိုတာ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ရန်အောင်၊ လူမင်း၊ ရဲမင်းပိုင်၊ နေဆန်း၊ ဟန်နီ တို့ ပါဝင်မည့် 'Cover' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကန်တော့ပြွဲ??
မာဆင် အနားယူမည့် သတင်းကြောင့် ကာဟေးလ် ယူကျုံး မရဖြစ်ခဲ့
‘သူစိမ်းအိမ် Horror ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီ ရုံတင်မည်
ဘားအံမြို့ နယ် ခလောက်ထောင်ကျေးရွာ တောင်ကြားရှိ သံဝေဇနိယ ဗုဒ္ဓဂယာသို့ လာရောက် ဖူးမြော်သူမျာ??